PCBA + Sanduuqa Plasitic - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Waxaan sameynaa shirar wax soo saar oo dhameystiran. Isku soo wada duubista PCBA ee ku xirnaanta balaastigga ayaa ah habka ugu caansan.
Sida shirkii PCB-ga, waxaan ku soo saarnaa qaybo wasakhdo / cirbado ah oo guriga dhexdiisa ah. Tani waxay siineysaa macaamilkeena faa'iido weyn marka la eego xakamaynta tayada, gaarsiinta iyo qiimaha.
Lahaanshaha aqoon qoto dheer oo ku saabsan caaryada / cirbadaha balaastigga ah ayaa ka soocaya Fumax warshad kale oo PCB nadiif ah Macaamiisha ayaa ku faraxsan inay ka helaan Fumax xalka muhiimka ah ee alaabada dhammaatay. La shaqeynta Fumax aad ayey ufududdahay bilawga ilaa badeecada dhammaatay.
Qalabka caagga ah ee ugu caansan ee aan la shaqeyno waa ABS, PC, PC / ABS, PP, Nylon, PVDF, PVC, PPS, PS, HDPE, iwm.
Waxa soo socda ayaa ah daraasad kiis oo ku saabsan shey ka kooban looxyada PCB, balaastikada, fiilooyin, isku xirayaasha, barnaamijyada, tijaabinta, xirmada… iwm ilaa dhamaan badeecada ugu dambeysa - diyaar u ah in la iibiyo.
Socodka guud ee wax soo saarka
Tallaabada wax soo saarka
Tijaabada / kormeerka talaabada
Kormeerka soo socda
AR9331 barnaamijka xasuusta
Isku imaatinka SMD
Kormeerka kulanka SMD
Iyadoo loo marayo isku duubnaanta daloolka
AR7420 barnaamijka xasuusta
Waxqabadka PLC imtixaanka
Sumadaha ayaa daabaca
Kursiga imtixaanka FAL
Qeexitaanka Soosaarka Alaabta ee Smart Master G3
1.1 Soo gaabin
AD Dukumentiga la adeegsan karo
AC Xilliga Kale
AOI Kormeerka Aaladda otomaatiga ah
AQL Xadka Tayada La Aqbali Karo
BOM Bill Of Waxyaabaha
SIIX Ganacsi Dhimasho
processor Cutubka dhexe ee Processor-ka
DC Toosan Hada
DVT Imtixaanka Xaqiijinta Naqshadda
EMS Adeeg Soosaarka Elektarooniga ah
ENIG Korontada Nickel Gelinta Dahabka
ESD Dheecaan ElectroStatic
FAL Khadka Golaha Ugu Dambeeya
IPC Ururka Iskuxirka Warshadaha Elektarooniga, horeyna u ahaan jiray Machadka Wareegyada Daabacan
LAN Shabakada Aaga Deegaanka
LED Diode koronto fudud
MSL Heer Xasaasi ah Qoyaanka
NA Midna Khusayn
PCB Guddiga Wareegga Daabacan
PLC Isgaarsiinta PowerLine
RDOC Tixraac DOCument
SMD Qalabka Dusha sare leh
GOS Nidaamka On Chip
SUC Silsilad SUPly
WAN Shabakad Ballaaran
1.2 Isbadal ku sameynta
→ Dukumiintiyada loo taxay sida RDOC-XXX-NN
Meesha "XXXX" noqon karto: SUC, QAL, PCB, ELE, MEC ama TST Halka "NN" ay tahay tirada dukumiintiga
Loogu taxay REQ-XXX-NNNN
Meesha "XXXX" noqon karto: SUC, QAL, PCB, ELE, MEC ama TST
Meesha “NNNN” ay tahay tirada shuruudaha
→ Hoosaadyo-hoosaadyo Loogu taxay sida MLSH-MG3-NN
Meesha “NN” ay tahay tirada golaha hoose
1.3 Dukumiintiga maareynta noocyada
Hoosaadyada iyo dukumiintiyada waxay leeyihiin noocyadooda ku diiwaangashan dukumintiga: FCM-0001-VVV
Firmwares waxay noocyadooda ka diiwaan gashan yihiin dukumiintiga: FCL-0001-VVV
Meesha "VVV" ay tahay nooca dukumiintiga.
2 Macnaha guud iyo shayga
Dukumintigaani wuxuu siinayaa shuruudaha wax soo saarka Smart Master G3.
Smart Master G3 wixii hadda ka dambeeya oo loo qoondeeyay "wax soo saar", waa isdhexgalka dhowr walxood sida elektarooniga iyo qaybaha makaanikada laakiin wuxuu u badan yahay nidaam elektaroonig ah. Waa sababta Mylight Systems (MLS) ay u raadinayso Adeeg Soosaaraha Elektaroonigga ah (EMS) si loo maareeyo dhammaan wax soo saarka sheyga.
Dukumiintigaan waa inuu u oggolaado qandaraasle qandaraasle ah inuu siiyo Mylight Systems dalab caalami ah oo ku saabsan wax soo saarka sheyga.
Ujeeddooyinka dukumintigan waa:
- Sii xog farsamo oo ku saabsan soosaarka badeecada,
- Sii shuruudaha tayada si loo hubiyo waafaqsanaanta sheyga,
- Sii sharuudaha looga baahan yahay silsiladda si loo hubiyo kharashka iyo xaddiga sheyga.
Qandaraasle hoosaadka EMS waa inuu ka jawaabaa 100% shuruudaha dukumintigan.
Ma jiraan wax shuruudo ah oo la beddeli karo iyada oo aan la helin heshiiska MLS.
Shuruudaha qaarkood (oo lagu calaamadeynayo "Naqshadeynta EMS ayaa la weydiiyay") weydiiso qandaraaslaha inuu jawaab ka bixiyo qodob farsamo, sida kontaroolada tayada ama baakadaha. Shuruudahaan waxaa loo daayay qandaraaslaha EMS si uu u soo jeediyo hal ama dhowr jawaabo. MLS ayaa markaa ansaxin doonta jawaabta.
MLS waa inay xiriir toos ah la leedahay qandaraaslaha EMS ee la xushay, laakiin qandaraaslaha EMS wuxuu dooran karaa oo iskiis u maamuli karaa qandaraaslayaal kale oo leh oggolaanshaha MLS.
3 Qaab dhismeedka burburka Golaha
4 socodka guud ee wax soo saarka
5 Shuruudaha saadka ee saadka
RDOC-SUC-1. Baaritaanka PLD-0013-CT 100A
RDOC-SUC-2. MLSH-MG3-25-MG3 shandad baako
RDOC-SUC-3. NTI-0001-Ogeysiis ku rakibida MG3
RDOC-SUC-4. GEF-0003-Gerber faylka AR9331 guddiga MG3
Qandaraaslaha qandaraaslaha ah ee la xushay waa inuu awood u yeeshaa inuu sameeyo ilaa 10K alaab bishii.
(Naqshadda EMS ayaa la weydiiyay)
Baakada rarka waxaa mas'uul ka ah qandaraaslaha.
Baakadaha rarka waa inay oggolaadaan in badeecadaha lagu qaado badda, hawada iyo waddooyinka.
Faahfaahinta baakada rarka waa in la siiyaa MLS.
Baakadaha rarka waa inay ku jiraan (eeg sawirka 2):
- Shayga MG3
- 1 kartoonka caadiga ah (tusaale: 163x135x105cm)
- Ilaalinta kartoonka gudaha
- 1 gacmo furan oo qurxoon (4 waji) oo leh astaanta Mylight iyo macluumaad kala duwan. Eeg RDOC-SUC-2.
- 3 baaritaanka CT. Eeg RDOC-SUC-1
- 1 Ethernet cable: fiilo fidsan, 3m, ROHS, go'doomin 300V, Cat 5E ama 6, CE, 60 ° c ugu yaraan
- 1 Warqad-farsameed RDOC-SUC-3
- 1 calaamadda dibedda ah ee leh macluumaadka aqoonsiga (qoraalka iyo koodhka baarka): Tixraac, Tiro taxane ah, cinwaanka PLC MAC
- Ka ilaalinta bacda caagga ah haddii ay suurogal tahay (in laga wada hadlo)
Jaantuska 2aad. Tusaalaha baakadaha
REQ-SUC-0022: Nooca baakadaha waaweyn
Qandaraasle-hoosaadka waa inuu bixiyaa sida baakadaha unugyada geynta ugu jiraan xirmooyinka waaweyn.
Tirada ugu badan ee xirmada cutubka 2 waa 25 gudaha kartoon weyn.
Macluumaadka aqoonsiga ee cutub kasta (oo wata lambar QR) waa in lagu arkaa calaamadda dibedda ee baakad kasta oo weyn.
REQ-SUC-0030: Qalabka PCB
Qandaraaslaha hoose waa inuu awood u leeyahay inuu keeno ama soo saaro PCB.
REQ-SUC-0040: Qalabka farsamada
Qandaraaslaha hoose waa inuu awood u leeyahay inuu keeno ama soo saaro sanduuqa bacda iyo dhammaan qeybaha farsamada.
REQ-SUC-0050: Qalabka elektarooniga ah ayaa la bixiyaa
Qandaraaslaha hoose waa inuu awood u leeyahay inuu soo bandhigo dhammaan qalabka elektaroniga.
REQ-SUC-0060: Xulista qaybaha dadban
Si loo wanaajiyo kharashka iyo habka loojistikada, qandaraaslaha qandaraaslaha ah wuxuu soo jeedin karaa tixraacyada loo adeegsanaayo dhammaan qeybaha kaladuwan ee lagu qeexay "guud" RDOC-ELEC-3. Waxyaabaha ku-meel-gaadhka ah waa inay u hoggaansamaan tiirarka sharraxaadda RDOC-ELEC-3.
Dhammaan qaybaha la xushay waa inay ansaxiyaan MLS.
REQ-SUC-0070: Qiimaha adduunka
Ujeedada qiimaha EXW ee sheyga waa in lagu bixiyaa dukumiinti go'an oo dib loo eegi karaa sanad walba.
REQ-SUC-0071: Qiimaha oo faahfaahsan
Qiimaha waa in lagu sharaxo ugu yaraan:
- BOM ee kulan kasta oo elektaroonik ah, qaybo makaanikada
- Kharashaadka dhismaha
- Qiimaha warshadaha: kuraasta, qalabka, habka, taxanaha hore…
REQ-SUC-0080: Aqbalaada feyl soosaarka
Faylka waxsoosaarka waa inuu si buuxda u dhammeystiraa una aqbalaa MLS kahor taxanaha hore iyo soosaarka ballaaran.
REQ-SUC-0090: Isbedelada feylka waxsoosaarka
Isbeddel kasta oo ku dhaca faylka wax soo saarka waa in uu soo sheegaa oo ay aqbalaan MLS.
REQ-SUC-0100: U qalmida tijaabada duuliyaha
U qalmida taxanaha hore ee alaabada 200 ayaa la weydiiyaa kahor intaan la bilaabin wax soo saar ballaaran.
Ciladaha iyo arrimaha la helay intii lagu jiray tijaabadan tijaabada ah waa in loo gudbiyaa MLS.
REQ-SUC-0101: Imtixaan taxane ah oo lagu kalsoonaan karo
Kadib soosaarida tijaabada duuliyaha, tijaabooyinka kalsoonida, ama Imtixaanka Xaqiijinta Naqshadda (DVT) waa in laguqabtaa uguyaraan:
- Wareegyada heerkulka degdegga ah -20 ° C / + 60 ° C
- Tijaabooyinka waxqabadka PLC
- Hubinta heerkulka gudaha
- Imtixaanka daadinta
- Tijaabooyin shaqeynaya oo buuxa
- Badhanka tijaabooyinka buuqa
- Waqti dheer ayaa ku gubanaya
- Bilow qabow / kulul
- Uumanta ayaa bilaabata
- Wareegyada awoodda
- Xirmooyinka isku xirayaasha Custom
Nidaamka imtixaanka oo faahfaahsan waxaa bixin doona qandaraaslaha oo waa inuu aqbalaa MLS.
Dhammaan tijaabooyinka dhicisoobay waa in lagu soo wargeliyaa MLS.
REQ-SUC-0110: Dalbo soosaarid
Dhamaan amarka wax soo saarka waxaa lagu sameyn doonaa macluumaadka hoose:
- Tixraac badeecada la weydiiyay
- Tirada alaabta
- Qeexitaanka baako
- Faylka nooca faylka ah
- Noocyada 'firmware versions'
- Faylka shakhsi ahaaneed (oo leh cinwaanka MAC iyo lambarro taxane ah)
Haddii mid ka mid ah macluumaadkan la seegay ama uusan caddeyn, EMS waa inaysan bilaabin wax soo saarka.
6 Shuruudaha tayada
PCB, qaybaha elektarooniga ah iyo shirarka elektarooniga ah waa in lagu keydiyaa qoyaanka iyo qolka heerkulka laga ilaaliyo:
- Qoyaan qaraabo ka hooseeya 10%
- Heerkulka u dhexeeya 20 ° C iyo 25 ° C.
Qandaraaslaha qandaraaslaha ah waa inuu leeyahay nidaam xakameyn MSL ah oo uu siiyo MLS.
PCB iyo dhowr qaybood oo lagu caddeeyey BOM waxay ku xiran yihiin habraacyada MSL.
Shayga waa inuu noqdaa mid u hoggaansamida RoHS.
Qandaraaslaha hoose waa inuu u sheegaa MLS walax kasta oo loo isticmaalo badeecada.
Tusaale ahaan, qandaraasluhu waa inuu ogeysiiyo MLS nooca xabagta / dhejiyaha / nadiifiye loo isticmaalo.
REQ-QUAL-0050: Tayada qandaraasle qandaraasle
Qandaraaslaha qandaraasle waa inuu shahaado ka haystaa ISO9001.
Qandaraaslaha qandaraaslaha ah waa inuu siiyaa shahaadadiisa ISO9001.
REQ-QUAL-0051: Tayada qandaraasle qandaraasle 2
Haddii qandaraasluhu la shaqeeyo qandaraasleyaasha kale, waa in sidoo kale la caddeeyaa ISO9001.
Dhammaan qaybaha elektiroonigga ah iyo looxyada elektiroonigga ah waa in lagu maareeyo ilaalinta ESD
Looxyada korantada waa in la nadiifiyaa haddii loo baahdo.
Nadiifintu waa inaysan dhaawicin qeybaha xasaasiga ah sida kuwa wax kala beddela, iskuxirayaasha, calaamadaha, badhannada, goojiyeyaasha ...
Qandaraaslaha hoose waa inuu siiyaa MLS nidaamkiisa nadaafadeed.
REQ-QUAL-0080: kormeerka soo socda
Dhammaan qaybaha elektiroonigga ah iyo dufcadaha PCB waa inay lahaadaan kormeer soo socda oo leh xaddidaadaha AQL.
Qaybaha farsamada waa inay lahaadaan cabir soo socda oo leh xadadka AQL haddii lagala baxo.
Qandaraaslaha qandaraaslaha ah waa inuu siiyaa MLS nidaamyadeeda xakamaynta soo socota oo ay ku jiraan xadka AQL.
REQ-QUAL-0090: Xakamaynta wax soo saarka
Shayga waa inuu lahaadaa kontorool soo saar leh ugu yaraan kormeerka muunada iyo xadka AQL.
Qandaraaslaha qandaraaslaha ah waa inuu siiyaa MLS nidaamyadeeda xakamaynta gelinta oo ay ku jiraan xadka AQL.
REQ-QAL-0100: Kaydinta alaabada la diiday
Badeecad kasta oo aan ka gudbin imtixaan ama xakameyn, iyadoo aan loo eegin imtixaan kasta, waa inuu ku kaydiyaa qandaraaslaha shirkadda MLS ee Baadhista Tayada.
REQ-QAL-0101: Macluumaadka alaabada la diiday
MLS waa in lala socodsiiyaa dhacdo kasta oo abuuri karta alaabo la diiday.
MLS waa in lala socodsiiyaa tirada alaabada la diiday ama dufcado kasta.
REQ-QAL-0110: Warbixinta Tayada Waxsoosaarka
Qandaraasle hoosaadka EMS waa inuu u wargaliyaa MLS dufcad kasta oo wax soo saar ah tirada alaabooyinka la diiday halkii imtixaan ama marxalad xakamayn.
Dhammaan kontaroolada, tijaabooyinka iyo kormeerka waa in la dhigaa oo la taariikheeyaa.
Dufcaddii waa in si cad loo garto oo lakala saaro.
Tixraacyo loo adeegsaday badeecada waa inay noqdaan kuwo la raad raaci karo (tixraac sax ah iyo dufcad).
Isbeddel kasta oo ku yimaada tixraac kasta waa in lagu ogeysiiyo MLS kahor dhaqan gelinta.
REQ-QUAL-0130: Diidmada Caalamka
MLS waxay soo celin kartaa dufcad dhameystiran haddii diidmada qandaraasle hoose ay ka sarreyso 3% in ka yar 2 sano.
REQ-QUAL-0140: Hantidhowrka / kormeerka dibedda
MLS waxaa loo oggol yahay inay booqato qandaraaslaha (oo ay ku jiraan qandaraaslayaasheeda) si ay u weydiiso warbixinno tayo leh iyo inay sameyso baaritaanno kormeer ah, ugu yaraan 2 jeer sanadkii ama wax soo saar kasta. MLS waxaa wakiil u noqon kara shirkad dhinac saddexaad ah.
REQ-QUAL-0150: Kormeer muuqaal ah
Badeecadu waxay leedahay xoogaa kormeer muuqaal ah oo lagu xusay gudaha socodka wax soo saarka guud.
Kormeerkan waxaa loola jeedaa:
- Hubinta sawirada
- Hubinta shirarka saxda ah
- Hubinta sumadaha / istiikarada
- Hubinta xoqida ama cillad kasta oo aragga ah
- Iskudhinta xoojinta
- Hubi kuleylka kuleylka ku wareegsan fiyuusyada
- Hubi jihooyinka fiilooyinka
- Hubinta xabagta
- Hubi baraha barafka
Qandaraaslaha hoose waa inuu siiyaa MLS nidaamyadeeda kormeerka Muuqaalka oo ay ku jiraan xadka AQL.
REQ-QUAL-0160: Socodka guud ee wax soo saarka
Amarka tillaabo kasta oo ka mid ah socodka guud ee wax soo saarka waa in la ixtiraamo.
Haddii sababo jira awgood, tusaale ahaan dib-u-qaabeyn, tallaabo waa in mar kale la sameeyaa, dhammaan tallaabooyinka ka dambeeya waa in mar labaad la qaadaa sidoo kale gaar ahaan baaritaanka Hipot iyo baaritaanka FAL.
7 Shuruudaha PCBs
Shayga wuxuu ka kooban yahay saddex PCB oo kala duwan
RDOC-PCB-1. IPC-A-600 Aqbalaada Guddiyada Daabacan
RDOC-PCB-2. GEF-0001-Gerber faylka guddiga guud ee MG3
RDOC-PCB-3. GEF-0002-Gerber faylka AR7420 guddiga MG3
RDOC-PCB-4. GEF-0003-Gerber faylka AR9331 guddiga MG3
RDOC-PCB-5. IEC 60695-11-10: 2013: Tijaabinta halista dabka - Qeybta 11-10: Ololka tijaabada - 50 W qaababka baaritaanka ololka jiifka iyo tooska ah
REQ-PCB-0010: Astaamaha PCB
Astaamaha muhiimka ah ee hoose waa in la ixtiraamo
Nambarada lakabyada 4
Dhumucda naxaasta dibadda 35µm / 1oz min
Cabirka PCB-yada 840x840x1.6mm (guddiga weyn), 348x326x1.2mm (guddiga AR7420),
780x536x1mm (guddiga AR9331)
Dhumucda naxaasta gudaha 17µm / 0.5oz min
Go'doonka ugu hooseeya / ballaca wadada 100µm
Maaskaro Alxan yar 100µm
Ugu yar dhexroor 250µm (makaanik)
Qalabka PCB FR4
Dhumucda ugu yar ee u dhexeeya 200µm
lakabyada maarta dibedda ah
Silkscreen Haa kor iyo hoosba, midab cad
Soldermask Haa, cagaar kor iyo hoosba, iyo wixii ka sarreeya dhammaan fiisooyinka
PCB on Guddi Haa, waa lagu hagaajin karaa baahida
Maaskaro kala qasan on via Haa
Qalabka ROHS / REACH /
REQ-PCB-0020: Baaritaanka PCB
Go'doominta shabagyada iyo habdhaqanka waa in 100% la tijaabiyaa.
REQ-PCB-0030: Calaamadeynta PCB
Calaamadeynta PCB-yada waxaa loo oggol yahay oo keliya aagga loo qoondeeyey.
PCB-yada waa in lagu calaamadeeyaa tixraaca PCB-ga, noocyadiisa iyo taariikhda wax-soo-saarka.
Tixraaca MLS waa in la adeegsadaa.
REQ-PCB-0040: Faylasha wax soo saarka PCB
Eeg RDOC-PCB-2, RDOC-PCB-3, RDOC-PCB-4.
Ka taxaddar, sifooyinka ku jira REQ-PCB-0010 waa macluumaadka ugu muhiimsan waana in la ixtiraamo.
REQ-PCB-0050: tayada PCB
Ka dib IPC-A-600 fasalka 1. Arag RDOC-PCB-1.
REQ-PCB-0060: Dhibaato la'aan
Qalabka loo isticmaalo PCB waa inuu waafaqsanaadaa CEI 60695-11-10 de V-1. Eeg RDOC-PCB-5.
8 Shuruudaha elektiroonigga ah ee la soo uruuriyay
3 guddiga korantada waa in la soo ururiyaa.
Dukumiintiyada elektarooniga ah
RDOC-ELEC-1. IPC-A-610 Aqbalaadda Kulamada elektarooniga ah
RDOC-ELEC-2. GEF-0001-Gerber faylka guddiga guud ee MG3 RDOC
ELEC-3. GEF-0002-Gerber faylka AR7420 guddiga MG3 RDOC
ELEC-4. GEF-0003-Gerber faylka AR9331 guddiga MG3 RDOC
ELEC-5. BOM-0001-BOM guddiga sare ee MG3 RDOC-ELEC-6.
BOM-0002 Faylka BOM ee guddiga AR7420 ee MG3 RDOC-ELEC-7.
BOM-0003 Faylka BOM ee guddiga AR9331 ee MG3
BOM RDOC-ELEC-5, RDOC-ELEC-6, iyo RDOC-ELEC-7 waa in la ixtiraamo.
REQ-ELEC-0020: Golaha qaybaha SMD:
Qaybaha 'SMD' waa in lagu soo ururiyaa qadka isku-xidhka otomaatiga ah.
Eeg RDOC-ELEC-2, RDOC-ELEC-3, RDOC-ELEC-4.
REQ-ELEC-0030: Isku-darka qaybaha daloolada:
Iyada oo loo marayo qaybaha godka waa in lagu dhejiyaa mowjad xulasho ah ama gacanta.
Biinanka haray waa in laga jaro ka hooseeya 3mm oo dherer ah.
REQ-ELEC-0040: Isugeynta xoojinta
Iskudhinta xoojinta waa in lagu sameeyaa ka hooseeya gudbinta.
Jaantuska 4-Adkaynta isugeynta dusha sare ee guddiga
REQ-ELEC-0050: Hoos u dhig kuleylka
Fiyuusyada (F2, F5, F6 sabuuradda dusheeda) waa inay lahaadaan hoos u dhac kuleylka ah si looga fogaado qaybaha gudaha ee lagu mudaayo xayndaabka haddii ay dhacdo xad-dhaaf.
Sawirka 5. Kuleylka ayaa ku yaraanaya agagaarka fiyuusyada
REQ-ELEC-0060: Difaaca caaga
Looma baahna difaac caag ah.
REQ-ELEC-0070: CT waxay baarayaan isku xirayaasha
Isku xirayaasha baaritaanka CT-da dheddigga waa in gacanta looga iibiyaa guddiga weyn sida ku xusan shaxanka hoose.
Adeegso tixraaca isku xiraha MLSH-MG3-21.
Ka taxaddar midabka iyo jihada fiilada.
Jaantus 6: Isku-xirayaasha isku xidhka baaritaanka CT
REQ-ELEC-0071: CT waxay baaraysaa isku xirayaasha xabagta
Xabagta waxay ubaahantahay in lagu daro isku xiraha baaritaanka CT si looga ilaaliyo qalalaasaha / isticmaalka xun ee soosaarka.
Fiiri sawirka hoose.
Tixraaca xabagtu wuxuu ku dhexyaala gudaha RDOC-ELEC-5.
Jaantuska 7aad. Koolo ku xiran iskuxirayaasha baaritaanka CT
No kulayleynta lama weydiinayo.
REQ-ELEC-0090: kormeerka Golaha AOI:
100% guddiga waa inuu lahaadaa kormeerka AOI (dhejinta, jihada iyo calaamadeynta).
Dhammaan looxyada waa in la baaraa.
Barnaamijka AOI oo faahfaahsan waa in la siiyaa MLS.
REQ-ELEC-0100: Koontaroolada qaybaha dadban:
Dhammaan qaybaha ku-meel-gaadhka ah waa in la hubiyaa ka hor inta aan laga warbixin PCB, uguyaraan kormeerka muuqaalka aadanaha.
Nidaamka xakamaynta qaybaha isdhaafsan ee faahfaahsan waa in la siiyaa MLS
REQ-ELEC-0110: Baaritaanka raajada:
Looma baahna baaritaanka raajada laakiin wareegga heerkulka iyo tijaabooyinka waxqabadka waa in loo sameeyaa wixii isbeddel ah ee ku saabsan habka isku imaatinka SMD
Tijaabooyinka wareegga heerkulka waa in loo sameeyaa tijaabooyin kasta oo soo-saar leh oo leh xadadka AQL.
REQ-ELEC-0120: Dib u shaqeynaya:
Dib-u-shaqaynta gacanta ee looxyada elektarooniga ah ayaa loo oggol yahay dhammaan qaybaha marka laga reebo wareegyada isku-darka: U21 / U22 (guddiga AR7420), U3 / U1 / U11 (guddiga AR9331).
Dib-u-shaqeyn toos ah ayaa loo oggol yahay dhammaan qaybaha.
Haddii badeecadu kala daadsan tahay si dib loogu howlgaliyo maxaa yeelay waxay ku fashilantay kursiga keydka ugu dambeeya, waa inay mar kale sameysaa baaritaanka Hipot iyo tijaabada ugu dambeysa.
REQ-ELEC-0130: 8pins isku xira u dhexeeya guddiga AR9331 iyo guddiga AR7420
Isku xirayaasha J10 waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro guddiga AR9331 iyo guddiga AR7420. Kulankan waa in lagu sameeyaa gacanta.
Tixraaca isku xiraha inuu isticmaalo waa MLSH-MG3-23.
Isku xiraha wuxuu leeyahay 2mm oo dherer ah dhererkiisuna waa 11mm.
Jaantus 8. Fiilooyinka iyo iskuxirayaasha udhaxeeya looxyada elektarooniga
REQ-ELEC-0140: isku xira 8pins oo udhaxeeya guddiga weyn iyo guddiga AR9331
Isku xirayaasha J12 waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro loox weyn iyo looxyada AR9331. Kulankan waa in lagu sameeyaa gacanta.
Tixraaca xarigga leh 2 isku xirayaasha waa
Xidhiidhiyayaasha la adeegsaday waxay leeyihiin 2mm oo dherer ah oo xarigga waa 50mm.
REQ-ELEC-0150: 2pins isku xira u dhexeeya guddiga Main iyo guddiga AR7420
Isku xira JP1 waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro guddiga ugu weyn guddiga AR7420. Kulankan waa in lagu sameeyaa gacanta.
Dhererka xariggu waa 50mm. Fiilooyinka waa in la qaloociyaa oo la ilaaliyaa / lagu hagaajiyaa hoos u dhaca kuleylka.
REQ-ELEC-0160: Golaha kululeeyaha kululeeyaha
Waa inaan loo isticmaalin kala firdhinta kuleyliyaha qori AR7420.
9 Shuruudaha qaybaha farsamada
RDOC-MEC-1. PLD-0001-PLD ee Xiritaanka Dusha sare ee MG3
RDOC-MEC-2. PLD-0002-PLD ee Xiritaanka Gunta MG3
RDOC-MEC-3. PLD-0003-PLD ee nalka sare ee MG3
RDOC-MEC-4. PLD-0004-PLD Button 1 ee MG3
RDOC-MEC-5. PLD-0005-PLD Badhanka 2 ee MG3
RDOC-MEC-6. PLD-0006-PLD ee Slider ee MG3
RDOC-MEC-7. IEC 60695-11-10: 2013: Tijaabinta halista dabka - Qaybta 11-10: Tijaabada ololka - 50 W jiifka iyo
hababka tijaabada ololka toosan
RDOC-MEC-8. IEC61010-2011 SHURUUDAHA BADBAADADA EE QALABKA korantada ee QIIMEYNTA,
Xakamaynta, iyo ISTICMAALKA SHAQADA - QAYBTA 1: SHURUUDAHA GUUD
RDOC-MEC-9. IEC61010-1 2010: Shuruudaha amniga ee qalabka korontada ee cabirka, xakamaynta,
iyo isticmaalka sheybaarka - Qeybta 1: Shuruudaha guud
RDOC-MEC-10. BOM-0016-BOM faylka MG3-V3
RDOC-MEC-11. PLA-0004-Sawirka Golaha ee MG3-V3
Jaantus 9. Muuqaalka qarxay ee MGE. Eeg RDOC-MEC-11 iyo RDOC-MEC-10
Xerada farsamada waxay ka kooban tahay 6 qaybo caag ah.
REQ-MEC-0010: Kahortaga guud ee dabka
Qaybaha balaastikadu waa inay u hoggaansamaan RDOC-MEC-8.
REQ-MEC-0020: Waxyaabaha ka kooban qaybaha balaastigga ah waa inay ahaadaan kuwo ololleeya (Naqshadda EMS ayaa la weydiiyay)
Qalabka loo isticmaalo qaybaha balaastigga waa inay lahaadaan darajada V-2 ama ka sii wanaagsan marka loo eego RDOC-MEC-7.
REQ- MEC-0030: Qalabka isku xirayaasha waa inay ahaadaan kuwo ololka dib u dhiga (Naqshadda EMS ayaa la weydiiyay)
Qalabka loo isticmaalo qaybaha isku xirayaasha waa inay lahaadaan darajada V-2 ama ka sii wanaagsan marka loo eego RDOC-MEC-7.
REQ-MEC-0040: Furitaanka gudaha makaanikada
Waa inuusan lahayn godad marka laga reebo:
- Isku xirayaasha (waa inay ka yaryihiin 0.5mm oo nadiifin farsamo ah)
- Godka dib-u-dejinta Warshadda (1.5mm)
- Godadka loogu talagalay faafitaanka heerkulka (dhexroorka 1.5mm oo u dhexeysa 4mm ugu yaraan) hareeraha isku xirayaasha Ethernet (fiiri sawirka hoose).
Jaantuska 10aad. Tusaalaha godadka ku yaal xayndaabka dibedda ee kuleylka kuleylka
REQ-MEC-0050: Midabka qaybaha
Dhammaan qaybaha balaastigga waa inay ahaadaan kuwo cad oo aan lahayn shuruudo kale.
REQ-MEC-0060: Midabka badhamada
Badhamadu waa inay ahaadaan buluug isla hooska astaanta MLS.
Guryuhu waa inay ixtiraamaan qorshooyinka RDOC-MEC-1, RDOC-MEC-2, RDOC-MEC-3, RDOC-MEC-4, RDOC-MEC-5, RDOC-MEC-6
COD-MEC-0080: caaryada la isku duro iyo qalabka
EMS ayaa loo oggol yahay inay maamusho nidaamka buuxa ee cirbadeynta balaastigga ah.
Calaamadaha cirbadeynta / wax soo saarka caaggu waa inaysan ka muuqan banaanka sheyga.
9.2 Kulan farsamo
REQ-MEC-0090: Iskuxirka biibiile fudud
Dhuumaha nalka waa in lagu soo ururiyaa iyadoo la isticmaalayo ilo kulul oo ah meelaha dhalaalaya.
Xayndaabka bannaanka waa in la dhalaaliyaa oo laga arkaa gudaha godadka barafka khaaska ah.
Jaantus 11. Tuubbo khafiif ah iyo badhannada waxay isku urursadaan ilo kulul
REQ-MEC-0100: Badhamada isku imaatin
Badhamada waa in lagu soo ururiyaa iyadoo la adeegsanayo ilo kulul oo ku saabsan barafka dhalaalaya.
REQ-MEC-0110: Ku dheji xayndaabka dusha sare
4 boolal ayaa loo isticmaalaa si loogu hagaajiyo loox AR9331 meesha ugu sarraysa. Eeg RDOC-MEC-11.
Waxaa loo adeegsaday tixraaca gudaha RDOC-MEC-10.
Xuddunta adkeynta waa inay ahaataa inta u dhexeysa 3.0 iyo 3.8 kgf.cm.
REQ-MEC-0120: Boolal ku yaal gunta hoose
4 boolal ayaa loo isticmaalaa si loogu hagaajiyo sabuuradda xayndaabka hoose. Eeg RDOC-MEC-11.
Isla boolal ayaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo xirmooyinka u dhexeeya.
Xuddunta adkeynta waa inay ahaataa inta udhaxeysa 5.0 iyo 6 kgf.cm.
REQ-MEC-0130: Wadada isku xirka baaritaanka CT ee xayndaabka
Qaybta gidaarka weelka ee isku xiraha baaritaanka CT waa in la saxaa isku soo uruuris la'aan qanjaruufo si loogu oggolaado hermeticity wanaagsan iyo xoog wanaagsan oo ka dhan ah jiidaya silig aan loo baahnayn.
Jaantuska 12aad. Qaybaha darbiga adag ee baaritaanka CT
9.3 Shaashadda ka baxsan
REQ-MEC-0140: silkskreen dibadeed
Hooska silkscreen waa in lagu sameeyaa xayndaabka kore.
Sawirka 13. Sawirka silsiladda bannaanka dibedda si loo ixtiraamo
REQ-MEC-0141: Midabka silkscreen-ka
Midabka shaashadda shaashadda waa inuu ahaadaa madow marka laga reebo astaanta MLS oo ah mid buluug ah (isku midab ka badan badhannada).
REQ-MEC-0150: Lambarka taxanaha cabbirka sumadda lambarka baarka
- Cabbirka calaamadda: 50mm * 10mm
- Cabirka qoraalka: dhererka 2mm
- Qiyaasta lambarka baarka: 40mm * 5mm
Jaantus 14. Tusaalaha sumadda lambarka taxanaha sumadda sumadda
REQ-MEC-0151: Lambarka taxanaha ah ee booska sumadda lambarka baarka
Eeg shuruudaha silkscreen ee Dibadda.
REQ-MEC-0152: Midab sumadda lambarka baarka lambarka sumadda
Lambarka taxanaha midabka sumadda baarku waa inuu noqdaa mid madow.
REQ-MEC-0153: Qalabka sumadda lambarka baarka nambarka nambarka
Sumadda nambarka taxanaha ah waa in lagu dhejiyaa oo macluumaadka waa inuusan lumin sida ku cad RDOC-MEC-9.
REQ-MEC-0154: Nambarka taxanaha ah ee sumadda lambarka sumadda sumadda
Qiimaha nambarka taxanaha ah waa inuu ku siiyaa MLS amarka soosaarka (feyl shaqsiyeed) ama softiweer loogu talagalay.
Hoos waxaa ku yaal qeexitaanka dabeecad kasta ee nambarka taxanaha ah:
M HAA MM XXXXX P
Ustaad Sanadka 2019 = 19 Bisha = 12da Diseembar Tiro muunad u ah dufcad kasta oo bil kasta ah Tixraaca Soo-saaraha
REQ-MEC-0160: Koodhka waxqabadka lambarka sumadda sumadda sumadda
REQ-MEC-0161: Koodhka firfircoonida lambarka sumadda sumadda
REQ-MEC-0162: Koodhka ku shaqaynta lambarka sumadda lambarka sumadda
Midabka sumadda furaha lambarka furaha waa inuu ahaadaa madow.
REQ-MEC-0163: Qalabka sumadda lambarka calaamadda koodhka furaha
Calaamadda koodhka firfircoonaanta waa in lagu dhejiyaa oo macluumaadka waa inuusan baabi'in sida ku cad RDOC-MEC-9.
REQ-MEC-0164: Nambarka taxanaha ah ee sumadda lambarka sumadda sumadda
Qiimaha furaha waxqabadka waa inuu ku siiyaa MLS amarka wax soo saarka (feyl shaqsiyeed) ama iyada oo loo marayo barnaamij gaar ah.
REQ-MEC-0170: Qiyaasta sumadda ugu weyn
- Aragti 48mm * 34mm
- Astaamaha waa in lagu beddelaa qaabka rasmiga ah. Cabirka Minimun: 3mm. Eeg RDOC-MEC-9.
- Cabirka qoraalka: ugu yaraan 1.5
Sawirka 16. Tusaalaha sumadda ugu weyn
REQ-MEC-0171: Meesha sumadda ugu weyn
Astaanta ugu weyn waa in lagu dhejiyaa dhinaca MG3 qolka heeganka ah.
Calaamaddu waa inay ka sarreysaa xayndaabka kor iyo hoosba si aan loo oggolaan karin furitaanka xayndaabka iyada oo aan la saarin calaamadda.
REQ-MEC-0172: Midabka sumadda ugu weyn
Midabka ugu weyn ee calaamaddu waa inuu noqdaa mid madow.
REQ-MEC-0173: Qalabka sumadda ugu weyn
Calaamadda ugu weyn waa in lagu dhejiyaa macluumaadkana waa inuusan lumin sida ku xusan RDOC-MEC-9, gaar ahaan astaanta amniga, korontada, Magaca Mylight-Systems iyo tixraaca alaabta
REQ-MEC-0174: Qiimaha sumadda ugu weyn
Qiimaha calaamadaha ugu muhiimsan waa in lagu siiyaa MLS amarka wax soo saarka (feyl shaqsiyeed) ama iyada oo loo marayo barnaamij gaar ah.
Qiimayaasha / qoraalka / astaanta / qoraalka waa inay ixtiraamaan sawirka ku jira REQ-MEC-0170.
9.5 CT baaritaannada
REQ-MEC-0190: Naqshadeynta baaritaanka CT
EMS-ka ayaa loo oggol yahay inuu iskiis u naqshadeeyo fiilooyinka baaritaanka CT, oo ay ku jiraan xarig dheddig oo ku xiran MG3, xarig lab oo ku xiran baaritaanka CT iyo fiilada dheereynta.
Sawirada oo dhan waa in la siiyaa MLS
REQ-MEC-0191: Waxyaabaha ka mid ah qaybaha baaritaanka CT waa inay noqdaan kuwa ololka dib u dhigaya (Naqshadda EMS ayaa la weydiiyay)
Waxyaabaha loo isticmaalo qaybaha balaastigga waa inay lahaadaan darajada V-2 ama ka sii wanaagsan marka loo eego CEI 60695-11-10.
REQ-MEC-0192: Waxyaabaha qaybaha baaritaanka CT waa inay lahaadaan go'doomin xarig ah Qalabka baaritaanka CT waa inuu lahaadaa go'doomin 300V laba jibbaaran.
REQ-MEC-0193: CT baaritaanka xarigga dumarka
Xiriirrada dumarka waa inay ka go'naadaan dusha sare ee la heli karo oo leh ugu yaraan 1.5mm (dhexroor ugu sarreeya godka 2mm).
Midabka fiilada waa inuu ahaadaa mid cad.
Fiilooyinka waxaa laga iibiyaa hal dhinac ilaa MG3 dhinaca kalena waa inuu lahaadaa isku xiraha dumarka ee la xiri karo oo la codeyn karo.
Fiilooyinka waa inay lahaadaan qayb la soo marsiiyay oo la marin doono taas oo loo adeegsan doono inay ka gudubto xayndaabka balaastigga ee MG3.
Dhererka xariggu waa inuu ahaadaa qiyaastii 70mm oo leh isku xiraha ka dib qaybta la marayo.
Tixraaca MLS ee qaybtaan wuxuu noqon doonaa MLSH-MG3-22
Jaantuska 18aad. CT baaritaanka tusaalaha dumarka
REQ-MEC-0194: CT baaritaan lab
Fiilooyinka waxaa laga iibiyaa hal dhinac ilaa baaritaanka CT-da dhinaca kalena waa inuu lahaado isku xiraha labka ah ee la xiri karo oo la codeyn karo.
Dhererka xariggu waa inuu ahaadaa qiyaastii 600mm oo aan lahayn isku xiraha.
Tixraaca MLS ee qaybtaan wuxuu noqon doonaa MLSH-MG3-24
REQ-MEC-0195: CT kordhinta fiilada
Dhererka xariggu waa inuu ahaadaa qiyaastii 3000mm bilaa xiriiriyayaal.
Tixraaca MLS ee qaybtaan wuxuu noqon doonaa MLSH-MG3-19
REQ-MEC-0196: Tixraaca baaritaanka CT
Tixraacyo dhowr ah oo ku saabsan baaritaanka CT ayaa la isticmaali karaa mustaqbalka.
EMS ayaa loo oggol yahay inay la macaamisho soo saaraha baaritaanka CT si loo soo ururiyo baaritaanka CT iyo fiilada.
Tixraaca 1 waa MLSH-MG3-15 oo leh:
- 100A / 50mA CT baaritaanka SCT-13 oo ka socda soo saaraha YHDC
- Xarigga MLSH-MG3-24
Jaantuska 20aad. CT baaritaanka 100A / 50mA MLSH-MG3-15
10 Tijaabooyin koronto
Dukumiintiyada tijaabinta korantada
RDOC-TST-1. Nidaamka keydka baaritaanka PRD-0001-MG3
RDOC-TST-2. Faylka BOM-0004-BOM ee keydka imtixaanka MG3
RDOC-TST-3. PLD-0008-PLD ee keydka baaritaanka MG3
RDOC-TST-4. SCH-0004-SCH faylka MG3 keydka imtixaanka
10.1 Imtixaanka PCBA
REQ-TST-0010: Imtixaanka PCBA
100% looxyada elektarooniga ah waa in la tijaabiyaa kahor farsamada farsamada
Hawlaha ugu yar ee lagu tijaabiyo waa:
- Kala-soocidda korontada ee guddiga weyn ee u dhexeeya N / L1 / L2 / L3, guddiga ugu weyn
- 5V, XVA (10.8V ilaa 11.6V), 3.3V (3.25V ilaa 3.35V) iyo 3.3VISO DC danab sax ah, guddiga weyn
- Relay ayaa si fiican u furan marka awood lahayn, guddiga weyn
- Go'doon ku saabsan RS485 oo u dhexeeya GND iyo A / B, guddiga AR9331
- 120 ohm iska caabin udhaxeysa A / B oo isku xira RS485, guddiga AR9331
- VDD_DDR, VDD25, DVDD12, 2.0V, 5.0V iyo 5V_RS485 DC danab sax ah, guddiga AR9331
- VDD iyo VDD2P0 DC saxnaanta danab, guddiga AR7420
Nidaamka baaritaanka PCBA oo faahfaahsan waa in la siiyaa MLS.
REQ-TST-0011: Imtixaanka PCBA
Soo-saaraha ayaa soo saari kara qalab lagu sameeyo tijaabooyinkan.
Qeexitaanka aaladda waa in la siiyaa MLS.
Jaantuska 21aad. Tusaalaha qalabaynta baaritaanka PCBA
10.2 Baaritaanka miskaha
REQ-TST-0020: Baaritaanka miskaha
100% qalabka waa in la tijaabiyaa ka dib isku imaatinka farsamada kaliya.
Haddii badeecadu kala daadsan tahay (dib-u-shaqeyn / dayactir ahaan tusaale ahaan) waa inay mar labaad sameysaa baaritaanka ka dib dib-u-farsameynta farsamada. Go'doominta Voltage Sare ee dekedda Ethernet iyo RS485 (dhinaca koowaad) waa in lagu tijaabiyaa korontada (dhinaca labaad) dhammaan baareyaasha.
Marka hal fiilo ayaa kuxiran 19 xarigood: Ethernet ports iyo RS485
Fiiladda kale waxay ku xiran tahay 4 fiilooyin: Dhexdhexaad iyo 3 weji
EMS waa inay sameysaa aalad si dhamaan koronto-wadayaasha dhinac walba uga saaraan isla xarigga si loo sameeyo hal tijaabo oo keliya.
DC 3100V danab waa in lagu dabaqo. 5s ugu badnaan si loo dejiyo danab ka dibna 2s ugu yar si loo ilaaliyo danab.
Wax daadinta hadda lama oggola.
Jaantus 22: Aaladda xarkaha si loo helo tijaabo Hipot fudud
10.3 Imtixaanka Waxqabadka PLC
REQ-TST-0030: Imtixaanka Waxqabadka PLC
(Naqshadeynta EMS ayaa la weydiyay ama loogu talagalay MLS)
100% qalabka waa in la tijaabiyaa
Shayga waa inuu maareeyaa inuu la xiriiro badeecad kale oo CPL ah, oo ah sida koronto PL 7667 ETH, iyada oo loo marayo fiilo 300m ah (waa la dabeyli karaa).
Qiyaasta xogta lagu cabiray qoraalka “plcrate.bat” waa inay ka sarreysaa 12mps, TX iyo RX.
Si loo helo isugeyn fudud fadlan isticmaal qoraalka "set_eth.bat" oo dhigay MAC "0013C1000000" iyo NMK "MyLight NMK".
Dhammaan tijaabooyinka waa inay qaataan ugu badnaan 15 / 30s oo ay ku jiraan isku xidhka fiilada korontada.
REQ-TST-0040: Xaalad Gubasho
Gubashada-In waa in lagu sameeyaa 100% looxyada elektarooniga ah iyadoo la raacayo kontoroolka soo socda:
- 230V koronto bixin
- Dakadaha Ethernet-ka ayaa go'ay
- Waxyaabo dhowr ah (ugu yaraan 10) isla waqti isku mid ah, isla khadka korantada, oo leh isla PLC NMK
REQ-TST-0041: kormeerka gubashada
- Saacad kasta oo jeegga la horkeeni karo ayaa bilig biligleysa oo gudbinta waa la dhaqaajin karaa / la xidhi karaa
10.5 Imtixaanka shirkii kama dambaysta ahaa
REQ-TST-0050: Imtixaankii shirkii kama-dambaysta ahaa
(Ugu yaraan hal keydka imtixaanka waxaa bixiya MLS)
100% alaabooyinka waa in lagu tijaabiyaa kursiga keydka imtixaanka kama dambaysta ah.
Waqtiga tijaabada waxaa loo maleynayaa inuu udhaxeeyo 2.30min ilaa 5min kadib marka la fiiriyo, otomatiga, khibrada wadaha, arimo kaladuwan oo dhici kara (sida cusbooneysiinta firmware, arinta xiriirka ee aaladda ama xasiloonida korontada).
Ujeedada ugu weyn ee kursiga keydka tijaabada ee ugu dambeeya waa in la tijaabiyo:
- Isticmaalka awoodda
- Hubi nooca firmwares-ka oo cusbooneysii haddii loo baahdo
- Hubi isgaarsiinta PLC adoo maraya miiraha
- Fiiri badhannada: Relays, PLC, Dib u dejinta Warshadda
- Hubso amaahda
- Hubi isgaarsiinta RS485
- Hubi isgaarsiinta Ethernet
- Samee cabbiridda cabbirka korontada
- Qor nambarada qaabeynta gudaha qalabka (MAC address, Number Serial)
Qalabaynta qalabka si aad u hesho
REQ-TST-0051: Buugga tijaabada kullanka kama dambeysta ah
Nidaamka keydka imtixaanka RDOC-TST-1 waa in si fiican loo akhriyaa loona fahmaa kahor isticmaalka si loo hubiyo:
- Badbaadada isticmaalaha
- Sax isticmaal keydka baaritaanka
- Waxqabadka kursiga keydka
REQ-TST-0052: Dayactirka tijaabada kulanka kama dambeysta ah
Hawlgalka dayactirka keydka imtixaanka waa in lagu sameeyaa si waafaqsan RDOC-TST-1.
REQ-TST-0053: Label imtixaanka kulanka ugu dambeeya
Warqad / warqad xayeysiis ah waa in lagu dhejiyaa badeecada sida lagu sharxay RDOC-TST-1.
REQ-TST-0054: Imtixaanka isku-imaatinka kama dambaysta ah ee Saldhigga Xogta Maxalliga ah
Dhammaan qoraalada ku keydsan kombiyuutarka maxaliga ah waa in si joogto ah loogu diraa Mylight Systems (ugu yaraan hal mar bishii ama hal mar dufcaddiiba).
REQ-TST-0055: Imtixaanka isku-imaatinka kama dambaysta ah ee Saldhigga Xogta Fog
Kursiga tijaabada waa inuu ku xirnaadaa internetka si aad ugu soo dirto diiwaanada meelaha fog fog waqtiga dhabta ah. Wadashaqeyn buuxda oo EMS ah ayaa la doonayaa in loo oggolaado isku xirnaanta gudaha shabakadeeda xiriirka gudaha.
REQ-TST-0056: Soo saarida keydka imtixaanka
MLS waxay u diri kartaa dhowr kursi baaritaanka MES haddii loo baahdo
EMS waxaa sidoo kale loo oggol yahay inay soo saarto keydka baaritaanka laftiisa iyadoo loo eegayo RDOC-TST-2, RDOC-TST-3 iyo RDOC-TST-4.
Haddii EMS ay rabto inay sameyso wax kasta oo hagaajin ah waa inay weydiisaa oggolaanshaha MLS.
Fadhiyada baaritaanka ee dib loo soo saaray waa inay ansaxiyaan MLS.
10.6 barnaamijka SOC AR9331
REQ-TST-0060: barnaamijka SOC AR9331
Xusuusta aaladda waa in lagu iftiimiyaa ka hor inta aan la kulmin barnaamij caalami ah oo aysan bixin MLS.
Qalabka kumbuyuutarka lagu shido waa inuu had iyo jeer noqdaa oo ansaxiyaa MLS ka hor qayb kasta.
Shakhsiyeyn halkan laguma weydiinayo, sidaa darteed aaladaha oo dhan waxay leeyihiin isla firmware halkan. Shakhsiyeyn shakhsiyeed ayaa lagu sameyn doonaa goor dambe gudaha kursiga keydka imtixaanka.
10.7 barnaamijka PLC chipset AR7420
REQ-TST-0070: barnaamijka PLC AR7420
Xusuusta aaladda waa in la iftiimiyaa ka hor inta aan la gubin imtixaannada si loo xoojiyo qalabka 'PLC chipset' inta lagu jiro baaritaanka.
Chipset-ka PLC waxaa lagu barnaamijiyaa softiweer ay bixiso MLS. Hawlgalka biligleyntu wuxuu qaataa 10s. Marka EMS waxay tixgelin kartaa ugu badnaan30s hawlgalka oo dhan (Cable power + Ethernet cable + Flash + Remove cable).
Shakhsiyeyn halkan laguma weydiinayo, sidaa darteed aaladaha oo dhan waxay leeyihiin isla firmware halkan. Shakhsiyeynta (cinwaanka MAC iyo DAK) ayaa lagu sameyn doonaa goor dambe gudaha keydka imtixaanka ugu dambeeya.
Xusuusta 'PLC chipset' sidoo kale waa la shidi karaa ka hor kulanka (si loo tijaabiyo).